Ciidamo badan oo la soo dhigay wadooyinka Muqdisho iyo dadka oo lugeynaya – STAR FM SOMALIA
Ciidamo badan oo la soo dhigay wadooyinka Muqdisho iyo dadka oo lugeynaya
Waxaa gabi ahaanba xiran wadooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho, iyadoo dadka ay yihiin kuwa cagtooda maalaya ama lugeynaya wadooyinka caasimada.
Si rasmi ah waxaa u dhaqan galay amarkii ahaa in la xiraayo wadooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho, islamarkaana uusan jiri doonin dhaq-dhaqaaqa gaadiidka dadweynaha ee magaalada gudaheeda.
Wadada Maka Al-Mukarama, Wadnaha iyo wadada Warshadaha, ayaa saaka gabi ahaanba xiran, waxaana halkaasi lagu arkayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan Dowladda, kuwaasi oo amniga sugaya.
Isgoyska kasta oo ku yaal Muqdisho waxaa ku go’an gaari Cabdi Bille ah iyo ciidamo badan, jidcadyaashana waxaa yaalla dhagxaan waaweyn iyo carooyin fara badan oo lagu gooyay.
Wadooyinka qaar ee Magaalada Muqdisho looma ogola inay maraan dadka iyo gaadiidka, gaar ahaan nawaaxiga wadada Afisiyooni, maadaama doorashada ay ka dhaceyso dhabarka dambe ee xarunta ciidamada Cirka ee Afisiyooni.
Ciidamada ayaa dadka shacabka ah u diidaya inay maraan halkaasi waxayna ku amrayaan inay guryahooda ku laabtaan oo aysan wax dhaq dhaqaaq ah sameyn karin.
Waxaa gabi ahaanba xiran wadooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho, iyadoo dadka ay yihiin kuwa cagtooda maalaya ama lugeynaya wadooyinka caasimada. Si rasmi ah waxaa u dhaqan galay amarkii ahaa in la xiraayo wadooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho, islamarkaana uusan jiri doonin dhaq-dhaqaaqa gaadiidka dadweynaha ee magaalada gudaheeda. Wadada Maka Al-Mukarama, Wadnaha iyo wadada Warshadaha, ayaa saaka gabi ahaanba xiran, waxaana halkaasi lagu arkayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan Dowladda, kuwaasi oo amniga sugaya. Isgoyska kasta oo ku yaal Muqdisho waxaa ku go’an gaari Cabdi Bille ah iyo ciidamo badan, jidcadyaashana waxaa yaalla dhagxaan waaweyn iyo carooyin fara badan oo lagu gooyay. Wadooyinka qaar ee Magaalada Muqdisho looma ogola inay maraan dadka iyo gaadiidka, gaar ahaan nawaaxiga wadada Afisiyooni, maadaama doorashada ay ka dhaceyso dhabarka dambe ee xarunta ciidamada Cirka ee Afisiyooni. Ciidamada ayaa dadka shacabka ah u diidaya inay maraan halkaasi waxayna ku amrayaan inay guryahooda ku laabtaan oo aysan wax dhaq dhaqaaq ah sameyn karin.
Cali Khaliif oo safar lama filaan ah ku tagay Hargeysa, ugana sii gudbay Jabuuti